Global Voices teny Malagasy » Thailandy: Manamafy Sivana Arakaraka ny Anatonan’ny Fitsapankevibahoaka Momba ny Lalàmpanorenana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Aogositra 2016 19:00 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika miora
Sokajy: Azia Atsinanana, Thailandy, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika
Koa satria mandrara ny famakiana ankalamanjana ireo antontan-taratasy fisafidianana ny “tsia” ireo manampahefana Thailandey, dia mamoaka sary avy any amin'ny trano fivoahana ireo mpikatroka mafana fo. Sary sy fanazavana avy amin'i ‏@sunaibkk
Nomen'ny governemanta tohanan'ny miaramila alàlana  hanakatona ireo tobinà haino aman-jery izay hita fa meloka amin'ny fandefasana fandaharana mandrahona ny fiandrianam-pirenena ny Kaomisiôna Nasionalin'ny Haino Amanjery sy ny Fifandraisandavitra (NBTC). Ankoatra izay, nomen'ny fitondrana miaramila zo tsimatimanota tsy ho tompon'andraikitra eo anatrehan'ny lalàna ireo manampahefana ao amin'ny NBTC.
Mino ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona fa mikendry ny hisoroka ny hetsi-panentanana ataon'ireo mpikatroka mafana fo sy ireo hery politika hafa enti-manohitra ny fanekena ilay volavolam-panorenana anatinà fitsapankevibahoaka kasaina hatao ny 7 Aogositra ity fitondrana ity.
Tambajotranà media maro no nanasonia  fanambaràna iombonana maneho ny ahiahin'izy ireo mikasika io fitondrana io:
Mety hiafara amin'ny fanatanterahan'ny media ny asany anatinà tontolo feno tahotra ny fivelaram-pahefana be loatra hamerana ny fahalalahan'ny fanaovan-gazety sy ny zon'ny vahoaka hahazo vaovao noho ny fampiasàna ny NBTC toy ny fitaovana, mety hiafara amin'ny tsy fahazoan'ny vahoaka vaovao marina sy voarafitra tsara izany.
Io fanambarana io dia nosoniavin'ny Filankevitra Nasionalin'ny Fanaovan-gazetin'i Thailandy, ny Fikambanan'ny Mpanao gazety Thai, ny Filankevitry ny Fandefasam-baovao ao Thailandy, ary ny Fikambanan'ireo Mpanome Vaovao Anaty Aterineto, tamin'ny 15 Jolay.
Naka ny fahefana ny miaramila tamin'ny 2014, saingy nanome toky ireo mpitarika fa hamerina ny fitondran'olompirenena vantany vao voapetraka ny fanovàna ny fomba fifidianana sy ny pôlitika. Roa taona aty aoriana, mbola mihazona ny fahefana ny miaramila. Voarara ny hetsi-panoherana, voaara-maso akaiky ny media, ary omena andianà ‘fanitsiana fomba fihetsika’  anatinà toby miaramila ireo mpanao politika sy mpanao gazety avy amin'ny mpanohitra.
Namolavola lalàmpanorenana ny fitondrana miaramila, izay tafiditra anatin'ny zotra famerenana amin'ny laoniny, saingy nanamarika ireo tsikera fa ahitàna fandaharana izay hanamafy ny fanarahamason'ny miaramila anatin'ny fitantanan-draharaha izany.
Tsy afaka manomboka hetsi-panentanana matanjaka mikasika ny vaovao momba ny lalàmpanorenana ireo mpikatroka mafana fo sy manampahaizana noho ny fandraran'ny governemanta ny adihevitra izay mety handresy lahatra ny olona hifidy ny eny na ny tsia. Mihizingizina ny fitondrana miaramila fa tsy mikatsaka afa-tsy ny hanajanonana ny fiparitahan'ny vaovao mampidi-doza sy tsy marina mikasika ny lalàm-panorenana ny Andinin-dalàna faha-61, kanefa milaza ireo mpikatroka mafana fo fa mahatonga ny famoretana ny fahalalahana miteny ho ara-dalàna izany.
Tanatin'ireo herinandro maro lasa, nosamborina ireo mpikatroka mafana fo izay mizara taratasy kely mampirisika ny vahoaka handà io volavolan-dalàmpanorenana io.
Mpitandro filaminana iray tsy manao fanamiana mikaroka ny latabatry ny mpanao gazety iray ao amin'ny biraon'ny Prachatai. Sary avy amin'ny Prachatai
Ny herinandro lasa teo,notanana an-trano maizina  ny mpanao gazety Taweesak Kerdpoka sy ireo mpikatroka mafana fo maro taorian'ny nahitan'ny mpitandro filaminana fitaovana fampahalalam-baovao mikasika ny lalàmpanorenena tao anatin'ny fiaran'izy ireo.
Efa navotsotra  izy ireo. Saingy avy eo dia notafihan'ny mpitandro filaminana  ny biraon'i Kerdpoka, izay miasa ho an'ny vohikala tsy miankina mpampita vaovao, Prachatai, mpiara-miasa amin'ny Global Voices . Nitatitra ny Prachatai tao amin'ny vohikalany fa toa nikaroka porofo hampifandraisana ilay fikambanana mpampita vaovao amin'ireo vondron'olona mpikatroka mafana fo manao hetsi-panentanana enti-manohitra ny lalàmpanorenana ny mpitandro filaminana.
— Sonja Jo (@Sonja_Jo) July 10, 2016 zzzzzz 
Taweesak no mpanao gazety voalohany nosamborina teo ambaninà lalàna vaovao mahatonga ny fitsikerana ny fitsapankevibahoaka ho tsy ara-dalàna.
Nanamafy  ny lanjan'ny media anatin'ny fanomezana vaovao voalanjalanja mikasika ilay volavolan-dalàmpanorenana ny Fiombonan'ny Fanaovangazety ao Azia Atsimo Atsinanana:
Eo anivon'ny media voaaramaso akaiky sy ny rivotra politika, ny media dia mitana toerana goavana be amin'ny fitanana ny fahazoan'ny vahoaka vaovao momba ireo endrika rehetran'ilay antontan-taratasy entina ho toy ny foto-pitantanana ny fireneny. Zava-dehibe ho an'ny olompirenena Thai ny fitaterana tsy misy sakana ireo fomba fijery samy hafa sy ireo hetsika, mba hahatrarana fijery voalanjalanja momba ireo lafitsara sy ireo lesoky ny volavolan'ny sata, izany rehetra izany dia mba hifidianany araka ny eritreriny.
Mampirisika ny governemanta Thai hanatsahatra  ny fampitahorana ny sehatry ny media ny Kaomity Mpiaro ny Mpanao Gazety:
Manizingizina  ny iLaw, vondrona iray mpampiroborobo ny fahalalahan'ny olompirenena, fa manisy sakana ny fitokisana ny fitsapankevibahoaka ny fandraran'ny Andinin-dalàna faha-61 ny vaovao izay “mampirisika”ny mpifidy amin'ny fomba iray na amin'ny hafa:
Nahatsikaritra izahay fa moana hafahafa ny adihevitry ny vahoaka momba ny Volavolan-dalàmpanorenana sy ny Fitsapankevibahoaka, na dia efa manatona haingana dia haingana aza ny andron'ny Fitsapankevibahoaka. Mataoatra hiteny ny vahoaka, na handray anjara anatinà adihevitra, na koa hitarika hetsi-panentanana. Tsy mitondra mankany aminà fitsapankevibahoaka malalaka sy marina ity rivotra ity, noho izany dia tsy inoana ny haneken'ny rehetra ireo vokatra, na ao Thailandy izany na any ivelany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/08/12/85674/
 Nomen'ny governemanta tohanan'ny miaramila alàlana: http://prachatai.org/english/node/6364
 ‘fanitsiana fomba fihetsika’: https://globalvoices.org/2015/02/06/thai-junta-cracks-down-on-dissent-summons-attitude-adjustment/
 famoretana : https://globalvoices.org/2016/07/02/thai-activists-use-toys-balloons-and-dolls-to-campaign-for-democracy/
 notanana an-trano maizina: http://www.khaosodenglish.com/politics/2016/07/11/journalist-associations-demand-release-reporter/
 mpiara-miasa amin'ny Global Voices: https://globalvoices.org/2015/05/15/global-voices-partners-with-thai-news-site-prachatai/
 July 10, 2016 zzzzzz: https://twitter.com/Sonja_Jo/status/752191729185488896